नेपाल समय बुधबार, साउन ६, २०७८, १७:३६:००
काला र गोराहरुले एकअर्काको अस्तित्व नै पटक्कै स्वीकार गर्दा रहेनछन्। दिनभर अफिसमा हुने झगडामध्ये ६० प्रतिशत झगडा कालो र गोरो अनि चिनियाँ र स्पेनिसका नाममा हुन्छन्। एकअर्काले पहिरन, खानपान, संस्कार, हिँडाइ, बोलाइ आदि विषयलाई लिएर प्रहार गरिरहेका हुन्छन्।
तारा भट्टराई शनिबार, साउन २, २०७८, १६:५३:००
मनमनै अपमान गर्ने साथीहरू नै ‘जातमा गर्व गर’ भनिरहेका छन्
रूपा सुनारले जस्तै मैले पनि आँटेको भए पाँच सात वटा जातीय छुवाछुत विभेदको मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो प्रहरी कार्यालयमा। मैले दिएको उजुरीलाई प्रहरीले दर्ता गरिदिएर कानुन कार्यान्वयन गर्थे भने घरबेटीहरू प्रहरी कार्यलयमा पुग्थे पनि होलान्।
विभेद छ हजुर सबैतिर!
परिवारका सदस्यहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा छोटोमा भन्दा पहुँचका हिसाबमा उचनिच भएमा घर, समाज वा साथीभाइले हेर्ने दृष्टिकोण एकै खालको हुन्छ र? मानौं एउटा घरमा दुई दाजुभाइ छन्, एउटा सरकारी जागिरे छ र अर्कोको खासै केही छैन भने बाबुआमाले अंशवण्डा गर्दा बाबु आमा कोसँग बस्लान्? त्यहाँ जवाफ सीधै छ हैन र?
रमेश ज्ञवाली मंगलबार, असार २२, २०७८, ०६:१६:००
शून्यबाट होइन, माइनसबाट उठ्नु छ
‘दैव लाग्यो तिमेरूलाई। काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ बाबु तिम्रो। बा भएको भए यता सोच्न पर्दैनथ्यो पढ्ने उमेरका तिमेरूले। खै कसरी के गर्छौ होला?’ भन्ने अनगिन्ती प्रश्नहरु आइरहन्छन्। हुन पनि न आयस्रोत न अब आयस्रोत आउने कुनै स्रोत बाँकी छन्। यति हुँदाहुँदै पनि म के कुरामा आशावादी छु भने दैव लाग्यो, दैवले नै उठाउँछन्।
नेपाल समय आईतबार, असार २०, २०७८, १५:३१:००
मृत्युको भयले डसेको त्यो क्षण
कतिबेला बेडमा पुगेर पछारिएँ, थाहै भएन। अब जिन्दगी यति नै रहेछ भन्ने लाग्यो। कति सपना बाँकी थिए, के के गर्छु भन्ने थियो। अल्पायुमै मर्न लेखेको रहेछ भनेर रुन आयो।
टिचिङ अस्पतालभित्र कोरोना बिरामीमाथि 'श्वेत अपराध'को दर्दनाक कथा
अस्पतालको कुरुप अनुहार देख्न नसकेर म त्रिवि शिक्षण अस्पतालको यो प्रतिविम्ब जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्दैछु। सेतो एप्रोनले खुनी अनुहार ढाक्न सक्तैन र ढाक्न दिनु हुँदैन भनेर पनि म तपाईंहरुसमक्ष यहाँ खाँटी सबुत पेस गर्दैछु।
नेपाल समय शनिबार, असार १२, २०७८, १८:१६:००
चर्चामा रहेको 'ड्रयागन म्यान'बारे यस्तो छ जानकारी
मैले पढेको समाचारअनुसार त त्यो हाम्रो, होमो नियन्डर्थल वा होमो इरेक्टसभन्दा पनि नजिकको सन्तान पर्ने रहेछ। मेरो उत्सुकता अझै बढ्यो र म त्यसबारे अझै खोजेर पढ्न थालेँ।
अचेल छोरो दंग छ, सधैं सँगै बस्न पाए कत्ति खुसी हुन्थ्यो!
‘नेताहरुले मास्क लगाउनु पर्दैन ममी?’ ‘लगाउनुपर्छ नि’ भनें मैले। उसले फेरि प्रश्न गर्‍यो, ‘हामीलाई मास्क लगाऊ भनेर आफूहरु लगाउँदैनन्। यिनीहरुलाई कोरोना सर्दैन?’ ‘सर्छ नि ! मिटिङमा भएर मास्क खोलेका हुन्।’
सग्लो शरीरले मात्र जीवन सुन्दर कहाँ हुन्छ र?
मान्छेको जीवनमा कथामात्र हुँदैनन्। त्यो कथाभित्र कुनै न कुनै उत्प्रेरणा पनि लुकेको हुन्छ। भलै, एकाध अपवाद कथा पनि होलान्, जसमा कुनै पनि कोणबाट प्रेरणादायी तत्त्व भेटिँदैन। तर मान्छेमा कुनै न कुनै उत्प्रेरणाको कथा हुन्छ नै। र एकाधमा यस्ता कथा अलि बढी नै हुन्छ।
भानु बोखिम शुक्रबार, जेठ २८, २०७८, ०७:१२:००
महामारीको पीडा : उनको मृत्युको खबर सुन्न नपाई ऊ आफैं अस्तायो
उसकी प्रेकिकाको उपचारका क्रममा तीन दिनअघि मृत्यु भएको खबर मैले उसका सामु उभिएर सुनाउन सकेको थिइनँ। उसकी प्रेमिकाको मृत्यु भएको खबर सुनाउनुअघि नै ऊ आफैं अस्ताइसकेको थियो। संक्रमणका कारणले निधन भएकाले म उसको घरभित्र गएर उसलाई नियाल्न पाइनँ।
नेपाल समय शनिबार, जेठ २२, २०७८, १९:४९:००
म एक्सपेरिमेन्ट (अनुसन्धान) गरिरहन्छु। एउटै कुरा जिन्दगीभर गरिरहन सक्दिन म। त्यसैले होला चाहे त्यो कफी खेतीतिर होस्, वा पर्यटकहरुलाई नेपालमा मद्दत हुने लेखहरु लेखेर होस् वा मानिसलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरेर होस् वा सूचना प्रविधिमा लागेर होस्, म ठाउँ–ठाउँमा हात हालिरहन्छु।
नेपाल समय मंगलबार, जेठ १८, २०७८, १७:३६:००
स्वास्थ्यकर्मी 'निर्जीव' भएका छौँ, निदाउन कहाँ सक्छौँ र?
आफ्नो दूधे शिशुलाई पाखा राखेर स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। आफ्नो अठोट र स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म बिरामीलाई छटपटीमा राखेर म निदाउन कहाँ सक्छु र?
सुनीता अर्याल मंगलबार, जेठ ११, २०७८, ०६:१३:००
कठिन रहेछ कोरोना : आफ्नै परिवारभित्रको दुःखमा पनि सामेल हुन सकिनँ
मनमनै इश्वर सम्झिएँ। मृत्यु सत्य छ। र कोरोना पोजिटिभ पनि हाम्रो परिवारका लागि सत्य देखियो। खानपानमा ख्याल राखेका थियौं। भीडभाडबाट बचेका थियौं। तर कोरोना लाग्यो। अचम्म!
अशेष मल्ल सोमबार, जेठ १०, २०७८, ०६:०९:००
प्रधानमन्त्रीको के भाे कुन्नि, अब जनताको 'मुड अफ' भो!
राष्ट्रपति कार्यालयबाट निर्णय दिन समय लाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको दाबी गलत छ भन्ने धेरैले बुझिसकेका थिए। किनकि यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा एक मिनेट पनि बिलम्ब नगरी सदर गर्दै आएको थियो।
महेश दुलाल शनिबार, जेठ ८, २०७८, १५:१९:००
यहाँ कहीँ कतै खुसी छैन
दौडधुपले असिनपसिन भएका डा. बास्तोला राति ११ बजे पीपीई खोलेर घर जान तयार भए। उनी निस्किन लागेका मात्र के थिए, अघि आईसीयूमा सारिएका राजेन्द्रले आँखा चिम्लिएछन्। उनको मृत्यु भएपछि वार्डमा भएका एक अधवैंशे पुरुषलाई आईसीयूमा सारियो।
अंगद सिंह बिहिबार, जेठ ६, २०७८, २०:०५:००
काेराेनापीडितकाे चीत्कार- प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईंलाई निद्रा लाग्छ?
कोभिडले पुत्र वियोगमा रहेकी मेरी एकल वृद्ध आमा जो उच्च रक्तचाप र बाथको समेत रोगी हुनुहुन्छ– अझै सम्हालिन सक्नुभएको छैन। पतिको मृत्युको खबरले पीडामा रहेकी मेरी भाउजू कोभिड निमोनियाको संक्रमण मात्र होइन मानसिक रुपमा समेत विक्षिप्त अवस्थामा हुनुहुन्छ।
टिपी भुसाल बिहिबार, जेठ ६, २०७८, ०६:११:००
म मृत्युको होइन, कोरोना जित्नेहरुको कथा लेख्न चाहन्छु। कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक योगदानको चर्चा गर्न चाहन्छु।
विनाेद परियार शनिबार, वैशाख २५, २०७८, १४:१०:००
सरकारले त लास मात्रै गनिरहेछ...
देश कोरोनाले आक्रान्त छ। अस्पतालका शय्या संक्रमितले भरिएका छन्। बिरामी अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन्। कतिपयचाहिँ अस्पतालको आँगनमै अक्सिजन! अक्सिजन!! भन्दै प्राण त्यागिरहेका छन्।
यज्ञराज जाेशी मंगलबार, वैशाख २१, २०७८, १२:१७:००
गुल्जार छ ठमेल
‘ए चस्मा, यता आऊ न कति लजाको’ भन्दै एक जना पछि लाग्दै थिइन्।
अंगद सिंह शनिबार, चैत २८, २०७७, ०९:५३:००
पब्जी समूहको नाम ‘ज्यानमारा’, खेलाडीलाई पारिश्रमिक !
कार्यक्रम थियो, पब्जी खेलाडीलाई ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ नामक फेसबुक ग्रुपले स्पोन्सर गर्ने। उसले पब्जी खेल्नेलाई मासिक तलबसहित भत्ता र खेल्ने ठाउँ पनि उपलब्ध गराउने रे!
विनय सापकोटा शनिबार, चैत १४, २०७७, १६:२३:००
यस कारण मैले कोभिड भ्याक्सिन लगाएँ
कफी–सप’ मा बसेर कफीको चुस्कीसँगै कसैलाई सम्झनु, बहकिनु र आफैंप्रति गुनासो वा गर्व गर्नु बेग्लै आनन्दको विषय हो। त्यसैले मलाई कफीको कपभन्दा प्रिय लाग्ने कमै चिज छन्।
तारा भट्टराई शनिबार, फागुन २९, २०७७, ०७:३७:००
'परदेशमै मरिएला कि भन्ने डर खोप लगाएपछि हट्यो'
कोरोना सुरु भएपछि मलाई लाग्थ्यो– कतै परदेशमै मरिने पो को कि ! तर, अहिले मलाई त्यो डर छैन। युएई सरकारले मेरो त्यो डरलाई दूर गरिदिएको छ।
तिलक बस्‍नेत आईतबार, माघ ४, २०७७, १६:०६:००
छाउगोठ भत्काइदिनेले मस्तिष्कमा रहेको छाउगोठ खै भत्काएको?
अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धहरूले परिवारबाट विवाहको स्वीकृति पाउन थालेका छन्। कुरा काट्ने बीचमा रहे पनि विधवाले निसंकोच रातो पहिरन लगाउन सकेका छन्। यी सबै सकारात्मक परिवर्तनका लागि आशाका किरण हुन्।
समीक्षा खतिवडा शनिबार, पुस २५, २०७७, १३:१२:००
नफ इज इनफ’ ग्रुपलाई नै लिऔं। यो नेतृत्वविहीन समूहले उठाएको अभियान हो। अभियानसँग प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नागरिक समाज तथा आमबुद्धिजीवी साथ दिन बाध्य भएका छन्। यस परिदृश्यबाट नेतृत्व व्यक्तिले होइन सिद्धान्त र व्यवहारले गर्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ।
विनय सापकोटा शनिबार, साउन २४, २०७७, १३:१३:५६
पत्रकारिता सुरु गर्दासम्म मलाई यसबारे गलत जानकारी मात्रै थियो। पहिलो बुझाइ थियो– पत्रकारले तलब पाउँदैनन् र, आम्दानी थोरै हुने व्यक्तिलाई कसैले छोरी दिँदैन।
मोहम्मद अकबर नोत्जाई शनिबार, साउन ३, २०७७, १९:३५:००
छठ, जुडशीतल, सलहेस, मिथिला, जनकपुरसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक प्रसंग उनैले सिकाए। मधेसी पहिरन, खानपान र जीवन पद्धितका धेरै कुरा उनैबाट थाहा भयो।
माधवप्रसाद नेपाल आईतबार, असार २१, २०७७, १४:२६:००
अन्य मुलुकमा जस्तो संक्रमितलाई चिन्न र छुट्टै राख्न मेहनत गर्नुको साटो नेपालमा फैलिँदैन भन्दै बस्यौं भने अस्पतालहरू भरिन थाल्नेछन् तब ‘विज्ञज्यूहरू’ लाई मुखभरिको जवाफ दिने गरी मृत्युदर पनि बढ्नेछ, त्यतिबेला धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ।
डा. अनूप सुवेदी बिहिबार, असार ११, २०७७, २२:००:००
समीक्षा खतिवडा शनिबार, असार ६, २०७७, १४:००:००
साेती घटना : न्यायका लागि जनदबाबकाे विकल्प छैन
सरकार यो घटनाप्रति गम्भीर छ र मुलुकमा बसोबास गर्ने ६० लाख दलितप्रति न्याय गर्न चाहन्छ, आमनागरिकलाई कानुनी शाासनको प्रत्याभूति दिन चाहन्छ भने अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।
अन्जु परियार शनिबार, जेठ २४, २०७७, १५:३०:००
मस्तिष्कमा भोजनको स्वादको एउटा छाप बसिसकेपछि ऊ हरेक खानालाई पहिलेको स्थापित स्वादसँग तुलना गर्न थाल्छ। स्थापित स्वाद आमाले बनाएको व्यञ्जनको हुन्छ र, यही तुलनाले लगातार आमाको हातको स्वाद स्मृतिमा बसिरहेको हुन्छ।
नेपाल समय आईतबार, जेठ ११, २०७७, ००:२०:००
पी साइनाथ आईतबार, वैशाख २१, २०७७, १७:३५:००
कञ्चनजंघाको शिखरमा २०१२ जेठ ११ मा पुगेका ब्राउनको अनुभव, त्यहाँको दृष्य, उनको कञ्चनजंघाबारे निजी धारणा बारेमा प्रश्नहरू तयार थिए। पुनः वैशाख ३ मा क्यासीको अर्को ताजा मेल आयो। मेलमा जोइ ब्राउनको सोही दिन मृत्यु भएको खबर थियो।
विराट अनुपम मंगलबार, वैशाख १६, २०७७, २०:२४:००
घटनाबारे सञ्चारकर्मीलाई सूचना उपलब्ध गराउने सुरक्षा निकायले पनि सावधानी नअपनाउँदा अनाहकमा निर्दोष दुई महिलाले तनाव भोग्नुपरेको छ।
धैर्यकान्त दत्त मंगलबार, वैशाख ९, २०७७, १९:१०:००
कोरोना संक्रमण, इस्लाम र सञ्चारमाध्यम
रोगले कसैमाथि भेदभाव गर्दैन। दरबारमा बस्ने होस् वा झुपडीमा रात गुजार्ने होस्। जुनसुकै जाति, धर्म, पेसा वा वर्णको होस्। त्यस्तै कोरोना भाइरसले पनि।
अर्कना खातुन सोमबार, वैशाख ८, २०७७, १६:०५:००
घर हिँडेकालाई धुलिखेलसम्म पछ्याउँदा...
अस्ति शनिबार बिहान नेपाल समयका फोटो पत्रकार दिनेश श्रेष्ठ र संवाददाता ज्योति अधिकारी रिपोर्टिङका लागि पशुपति क्षेत्र पुग्दा केही मजदुर मन दुखाएर बसिरहेका थिए।
नेपाल समय सोमबार, वैशाख १, २०७७, २०:३०:०८
कोरोनाको उच्च जोखिममा प्रदेश २ : राउत बन्लान् त उदाहरणीय ?
प्रदेश २ मा अहिलेसम्म कसैमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको छैन। १५९ जनाको स्वाब संकलन भएकोमा ११३ जनामा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ। अरु रिपोर्ट आउन बाँकी छ।
धैर्यकान्त दत्त शुक्रबार, चैत २८, २०७६, १८:०२:००
कोरोना भाइरसपछि आउने बहारको पर्खाइ
गाउँबाट हजुरआमाको सन्देश आएको छ, गुराँसले परिवेश रंगाउन सुरु गर्‍यो रे ! हजुरआमाको बगैंचामा काफल, कागती, आलुबखडाजस्ता फलफूलले चहलपहल ल्याउन खोज्दैछन्।
अलका काैशिक सोमबार, चैत १७, २०७६, १३:३४:००
के तपाईंसँग सेल्फी लिन सक्छु?
नेपालमा जन्मेहुर्केकी म, अमेरिकामा नयाँ संस्कृति अनुभूत गर्दैछुु। जो कसैसँग पनि आँखा जुध्दा मुसुक्क हाँस्ने यहाँको चलन खुबै मन पर्छ।
लीना दुवाडी बिहिबार, चैत १३, २०७६, ०७:१५:००
ट्रम्प-मोदी मिलनको उद्देश्य
यो पूरा यात्रा आयोजनाको मुख्य पक्ष अहमदाबादमा आयोजित ‘रोड सो’ र नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम नै हो।
नेपाल समय सोमबार, फागुन १२, २०७६, २३:५७:३७
केजरीवालले १० वर्षअघि देखाएको आशा
एउटा हातमा माइक, अर्को हातले भारतको वर्तमान राजनीतिक इतिहासको मानचित्रमा देखा परेका भ्रष्ट चरित्रहरूको भिषण चित्रणका हाउभाउ अर्थ्याउँदै गरेको । बेलाबेलामा भिडबाट स्वःफूर्त समर्थनको चिच्याहट ।
मातृका पौडेल शनिबार, फागुन १०, २०७६, २०:०१:००
कानुनले मात्रै हुँदैन सडक व्यवस्थापन
एकदिन तीनकुनेको सडक छेउ उभिएका एक यात्रुले हात उठाए। म बसभित्र ड्राइभरको छेउमा उभिएको थिएँ। चालकले ‘ट्याक्सी हो र जहाँ पायो त्यहीँ रोक्नलाई ?’ भन्दै बस कुदाए।
शान्तिकृष्ण अधिकारी बुधबार, माघ १, २०७६, १५:१३:२१
‘के हामी फोहोरी लाग्‍छौं ?’
समाजमा विशृंखलता छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीच पनि सामान्य शिष्टाचार र आपसी सद्भाव दुर्लभ बन्दै गएको छ ।
मातृका पौडेल मंगलबार, पुस २९, २०७६, १६:३२:१०
बीपी साह शनिबार, पुस १९, २०७६, १६:३८:३८
शिवराज खत्री शनिबार, पुस १९, २०७६, ०९:२३:३९
युवा अवस्थामा फ्रायडमाथि खुबै परिचर्चा गरिन्थ्यो। यौन मनोविज्ञानमाथिका उनका उत्तेजक विचारलाई विवाहसँग जोडेर हामी उद्वेलित हुन्थ्यौं। केही पछि हाम्रो समूहमा ओशो आए। ओशोका यौन र समाधिसम्बन्धी विचारलाई जीवन र जगतसँग जोडेर हेर्न थाल्यौं।
केशव दाहाल बिहिबार, कात्तिक १४, २०७६, ००:०८:००
'संविधानप्रतिको असन्तुष्टिमा भावनात्मक कुरा बढी छ'
मधेशमात्र होइन आम नागरिकले महशुस गर्ने के हो भने, उसको जीवनमा सहजता आयो कि आएन। यो धेरै हदसम्म भावनात्मक कुरा पनि हो । किनभने संविधानप्रति विमति जनाउनुपर्ने खासै ठूला कारणहरु छैनन् ।
प्रा‍. सुरेन्द्र लाभ शुक्रबार, असोज ३, २०७६, ००:०८:००
सीता मेडम र हेडसरको पिटाइ
अहिलेको जस्तो गाउँ नजिकै स्कुल थिएन हामी पढ्ने बेलामा। स्कुल टाढा हुँदा ६ वर्षको उमेर पछि मात्र कखरा चिन्ने अवसर मिल्यो।
शिवराज खत्री शनिबार, भदौ १४, २०७६, ००:०८:००
‘घरमा को को छ ? तिम्रो बाबा के गर्नुहुन्छ?’ अरुका लागि निकै सहज यस्ता प्रश्नहरु मेरा लागि भने कैयौं कोर्रा हाने सरह हुन्थे ।
निरु मगर शुक्रबार, भदौ १३, २०७६, ००:०८:००
'राजधानी' को समाचारले मृत्युवरण गरेको दिन!
नेपाल समय सोमबार, पुस १७, २०७४, ००:०८:००